အဆိုပါ Phrase စမတ်ဆေး၏ generic အသုံးပြုခြင်း
အဆိုပါထားသောစာပိုဒ်တိုများစမတ်ဆေးလုံးဆေးဖက်ဆိုင်ရာကိရိယာကဂျရုမ်း Schentag နှင့်ဒါဝိဒ်က D'Andrea နေဖြင့်မူပိုင်ခွင့်များနှင့်လူကြိုက်များသောသိပ္ပံမဂ္ဂဇင်းအားဖြင့် 1992 ခုနှစ်ရဲ့ထိပ်တီထွင်မှုများ၏တဦးတည်းအမည်ရှိ၏ထိန်းချုပ်ထားကွန်ပျူတာပြီးနောက်လူကြိုက်များဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုအမည်ဖြင့်ယေဘုယျဖြစ်လာသည်နှင့်ကုမ္ပဏီအများအပြားနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. စမတ်ဆေးလုံးကို အသုံးပြု. ရသည်။
ဂျရုမ်း Schentag, Buffalo တက္ကသိုလ်ဆေးဝါးသိပ္ပံပညာပါမောက္ခ, အီလက်ထရောနစ်ခြေရာခံနှင့်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းထဲမှာကကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောတည်နေရာတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးကယ်လွှတ်ခြင်းငှါညွှန်ကြားနိုင်သည့်ကွန်ပျူတာ-controlled "Smart ဆေးလုံး" ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ဒါဝိဒ်သည် D'Andrea ပူးတွဲတီထွင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
UB သတင်းထောက် Ellen Goldbaum microminiature အီလက်ထရွန်းနစ်, စက်မှုနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆေးဝါးသိပ္ပံပေါင်းစပ်အဖြစ်စမတ်ဆေးလုံးဖော်ပြသည်။ "ဒီဆေးတောင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာအတွက်သိသာထင်ရှားသောကြိုတင်ကိုယ်စားပြုတယ်," က D'Andrea အဆိုပါစမတ်ဆေးနှင့်အတူ, ကျွန်တော်တစ်ဦးရှုပ်ထွေးသောအီလက်ထရောနစ်စနစ်က miniaturize နှင့်ဆေးတောင့်သို့အကြောင်းကိုတဦးတည်းလက်မရှည်လျားပါကထည့်သွင်းနိုင်ပါပြီ။ သင်ကနေ ", UB သတင်းထောက်တွေကိုဆိုပါတယ် ရုံဆေးလုံးကိုယူပြီးမဟုတ်, သင်တူရိယာမျိုချပါတယ်။
ဒါဝိဒ်သည် D'Andrea အဆိုပါစမတ်ဆေး၏ထုတ်လုပ်သူ Gastrotarget, Inc ၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျရုမ်း Schentag သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီ၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါသည်။
D'Andrea လည်း Millard Fillmore ဆေးရုံရဲ့အင်ဂျင်နီယာနှင့်ကိရိယာများကိုဓါတ်ခွဲခန်း၏ဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ယသေရော tulle နှင့်အမြိုးအနှယျလေ့ကျင့်ခန်းများကိုတီထှငျခဲ့
ခန္ဓာကိုယ်ချပ်ဝတ်တန်ဆာများနှင့် Bullet သက်သေပြချက်အင်္ကျီ၏သမိုင်း
Segway လူ့ Transporter
အထည် - အပိတ်ထည်၏သမိုင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနား Fibers
အဆိုပါသမိုင်း Scotch ၏တိပ်
သောမတ်စ်အက်ဒီဆင် - Kinetophones
အပူချိန်နေ့တစ်လျှောက်လုံး Fluctuates ဘယ်လို
သင်ခန်းစာကိုအစီအစဉ်: လေယာဉ် Coordinate
ဝါကျများတွင် Rambling နှင့် Run ကိုနားလည်ခြင်း
ဂြာမနျတွင် Gehen (Go မှ) Conjugate လုပ်နည်း
Simplifying ထပ်ကိန်း - တစ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ပါဝါ
ESL / EFL သင်ယူသူများအတွက်ထိပ်တန်းအင်္ဂလိပ် Grammar စာအုပ်ပုံနှိပ်
ဘတ်စကက်ဘောအတွက်ကောင်းမွန်သောတစ်ဦးချင်းကာကွယ်ရေး Play ရန်ကဘယ်လို
တစ်ဦး Pro ကို Surfer ဖြစ်လာလုပ်နည်း
မစ္စစ် Claus Dumps စန်တာ: တစ်ဦးကဟာသအမျိုးသမီး Monologue
Blackjack Shufflers ရိုက်နှက်
တစ်ဦး OHV ၏အဓိပ္ပာယ်
တရုတ်ဆေးပညာ၏ငါး Shen ဖို့နိဒါန်း
က Les vepres siciliennes ဇာတ်လမ်းအကျဥ်း
ဝီလျံ Blake က
Hard-အဖျားခတ်ဂလမ်သတ္တု Band Dokken ကနေထိပ်တန်း '' 80s သီချင်းများ
မြင်းကောင်ရေအားနှင့် torque အကြားခြားနားချက်
ဘဲလေးသတ်မှတ်ချက်များကိုပြင်သစ်ဘာသာစကားကို မှစ. Come အဘယ်ကြောင့်